Xasan Kheyre & Farmaajo oo qadka taleefanka kuwada hadlay, Maxay kawada hadleen? | SMC
Home WARARKA MAANTA Xasan Kheyre & Farmaajo oo qadka taleefanka kuwada hadlay, Maxay kawada hadleen?
Xasan Kheyre & Farmaajo oo qadka taleefanka kuwada hadlay, Maxay kawada hadleen?
Habeenkii Khamiiska oo jimcaha soo galeeysay, xiliga waqitiga danbe ee Muqadisho, waxaa qadka taleefanka kuwada hadlay Xasan Cali Kheyre iyo Madxaweyne Farmaajo. Kulankaas oo qaatay in ka badan saacad ayaa la sheegayaa in uu daba-socday wadahadalo maalmihii u danbeeysay u socday labada nin.
Ilo lagu kalsoon yahay oo aad ula socda wadahadalka Farmaajo iyo Kheyre ayaa u sheegay SMC in maalmihii u danbeeysay uu u socday labada dhinac wadahadal la xiriira doorshada lagu wado in ay ka dhacdo dalka bilaha fooda nagu soo haya.
Xasan Kheyre oo si farsameysan looga ceyriyay mas’uuliyidii Ra’iisal Wasaaranimada dalka, ayaa dad badan rumeysan yihiin in isaga iyo Farmaajo uu ka dhaxeeyo xiriir hoose oo lagu qaldayo shacabka iyo mucaaradka dowlada.
SMC wali ma helin xogta rasmiga ee kulankii habeenkii Khamiista ay kawada hadleen Farmaajo iyo Kheyre, laakiin waxa aan shaki ku jirin in labada dhinac si hoose uwada xiriiraan. Xasan Kheyre ayaan wali ka hadlin dhibaatada loo geystay shacabka Soomaaliyeed, inta uu xilka hayay.
Waxaana muuqata in Kheyre uu ka leexday in uu eedeeyo Farmaajo iyo maamulkiisa. Dhanka kale waxaa jira warar sheegaya in Farmaajo iyo Kheyre ay si-wadajira u dhaceen hanti umadda Soomaaliyeed loogu dhiibay, sidaas darteedna uu Kheyre marnaba ka hadli karin hogaanka Farmaajo iyo dhibka uu gaystay.
Dhanka kale waxa jira wada-hadalo ay siwadajira u wadaan dowlada Qatar, Tukriga kuwaas oo lagu doonaya in Xasan Kheyre uu dib ugu biiro Farmaajo, kuna caawiyo in uu taageero musharaxnimada Farmaajo.
Dhawaan waxaad naga filataan qormo gaar ah oo aan uga hadleyno wadahadalada u dhaxeeya Farmaajo iyo Fahad oo isku dhan ah iyo Xasan Cali Kheyre oo dhanka kale ka soo jeedo, iyada sida loo jahawareerinayo mucaaradka Farmaajo iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Previous articleCiidanka TPLF oo gantaallo ku garaacday Garoonka Diyaaradaha & Wasaaradda Warfaafinta Eriteriya
Next articleQorshaha Fahad Yaasiin rabo in uu “ku Boobo” xulista baarlamaanka 2021 & Halis ka jirta